संसद्को मर्यादा राख- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
संसद्को मर्यादा राख
संसद् बैठक प्रायः सधैं खाली देखिन्छ  । उपस्थित सांसदहरू खाली कुर्सीलाई आफ्ना र राष्ट्रिय समस्या सुनाउन बाध्य छन्  ।
सांसदहरू किन गैरजिम्मेवार हुँदै गइरहेका छन् ? उनीहरूमा नैतिक जिम्मेवारीको कमी वा सभामुखको कार्यक्षमताको कमी, के हो ? जसका कारण संसद् बैठक प्रायः खाली नै हुन्छ । चुनावका बेला जनताका घरदैलो पुगेर गरेका वाचातर्फ सांसदहरू किन संवेदनशील बन्न सकिरहेका छैनन् ? सांसदहरू जनताका नभई मात्र पार्टीका कार्यकर्ता बन्न पुगेका छन् तब त पार्टीले ह्वीप जारी गरेको समयमा बाहेक उनीहरूको संसद् बैठकमा मतलब भत्ताका लागि मात्र पुग्ने गरेका छन् । यो समस्या कसरी र कसले व्यवस्थापन गर्ने ? आगामी दिनमा उनीहरूको उपस्थितिलाई आधार बनाएर उनीहरूको तलब भत्ताको व्यवस्थापन गर्ने हो ? वा सभामुखले कानुनी हतियार देखाउने ? समाधान छिटो खोजिनुपर्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ १०:३३
समान काम असमान दाम
आरक्षण कोटामा विवाद
भद्रगोल शिक्षक व्यवस्थापन
सडकै बेचिने मुलुक